Daryeelka waxaa mas’uul ka ah maamulada degmooyinka ama gobollada.
Talo-bixinta-caafimaadka waxeey furan tahay afar iyo laabatanka saac. Lambarka telefoonka waa 1177. Waxaad halkaas ka heli kartaa talobixin loo turjumay af-soomaali iyo carabi. Talo bixinta caafimaadkana wuxaa laga helaa bogga tnternetka www.1177.se. Waxaase boggas laga heli karaa warbixino ku qoran afaf badan.